TCDD'nin Ankara Santral Numarası Değişiyor!.. | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီAnkara ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအရေအတွက် TCDD ပြောင်းလဲနေသည်!
15 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, TCDD 1
tcddn တူရကီ switchboard အရေအတွက်ကပြောင်းလဲမှုများ
0312 520 00 00 ကိုအင်ကာရာရှိ TCDD ယူနစ်များ၏စွမ်းအင်စက်ရုံအသစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်သည်။
TCDD,2၏ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း TCDD ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန။ နှင့် 8 ။ 0312 520 00 00 ကို Ankara ရှိဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနအရေအတွက်သို့ပြောင်းထားသည်။
TCDD ၏အတွင်းပိုင်းစာရင်းပေးသွင်းသူများအား switchboard အော်ပရေတာကိုခေါ်ခြင်းနှင့်ကြေငြာခြင်းမပါဘဲ GSM ဖုန်းများနှင့်ပြင်ပဖုန်းများမှတဆင့်တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
2013 6461 နှစ်ပေါင်းအမှတ်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ၏လက်အောက်ခံအဖြစ်ထူထောင်အဆိုပါဥပဒေမီးရထားပို့ဆောင်ရေးလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့အပေါ်တူရကီအတွက်အင်အားသုံးသို့ကြွတော်မူ .. Ankara ပြည်နယ်ရှိအထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနနှင့်ယူနစ်များအနေဖြင့် 0312 309 05 15 ရှိလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဟောင်းကိုဆက်လက်အသုံးပြုမည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Konya မီးရထားဘူတာဓာတ်အားပေးစက်ရုံပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်း
ခရီးသွားဧည့်အရှေ့ Express ကိုထွက်ခွာအချိန်ပြောင်းလဲနေပါတယ်
Stop တူရကီအတွက် YHT လေ့လာရေးခရီးပြောင်းခြင်း Start
ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများအားဖြင့် Mersin ရဲ့ပြောင်းခြင်းလိုအပ်ချက်များ
BUDO Mudanya ဆိပ်ခံတံတား၏အခန်းက္ပပြောင်းခြင်း